समयसीमा तोकेर तार व्यवस्थापन गर्न दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना किन आयो ? यस्तो छ भित्री कुरा - Technology Khabar
» समयसीमा तोकेर तार व्यवस्थापन गर्न दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना किन आयो ? यस्तो छ भित्री कुरा
समयसीमा तोकेर तार व्यवस्थापन गर्न दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना किन आयो ? यस्तो छ भित्री कुरा
Technology Khabar १४ आश्विन २०७६, मंगलवार
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबुल अपरेटरलगायत अन्य संघ संस्थाहरुलाई अव्यवस्थित तार मिलाउन भनेको छ ।
शहरको सुन्दरतामा असर गर्ने गरी तार झुण्डाउने तथा सडक क्रस गराउने लगायतका कार्यले शहरको सुन्दरतामा असर पुग्नुको साथै गंभिर दुर्घटना भईरहेको भन्दै त्यसलाई प्राधिकरणले दशैं अगाडि नै व्यवस्थित गराउन भनेको थियो । यसअगाडी पनि यस्तो सूचना आउने गरेको भएपनि यो सूचनामा भने समयसीमा तोकिएको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ताले पनि शहरको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने तथा अव्यवस्थित तारलाई मिलाउन भनिएको जानकारी दिए ।
हामीले आइस्पानलगायत सबैलाई पोलमा रहेका तार मिलाउन र व्यवस्थित बनाउन नोटिस जारी गरेका हौं, सोहि सूचनालाई नै आधारमानेर दशैं अगाडि नै काम गर्नुपर्नेछ, उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने । यसअघि पनि तार व्यवस्थित गर्न निर्देशन तथा सूचना आउने गरेपछि छोटो समय सीमा तोकेर आउने गरेको थिएन् ।
तर प्राधिकरणले पहिलो पटक समय सीमा तोकेर नै दशैं अगाडि तार व्यवस्थित दिनुको भित्री कारण भने आसन्न चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रहेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर कडाईका साथ काम गर्न आइस्पानहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आसन्न भ्रमणको बेलामा उनी हिँड्ने रुटमा भएका अव्यवस्थित तारहरु मिलाउन प्राधिकरणले विशेष जोड दिएको छ । प्राधिकरणले विशेषगरि चिनियाँ राष्ट्रपति हिंड्ने रुटहरुका तारहरु तत्काल मिलाउन र व्यवस्थित गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई बोलाएर नै निर्देशन दिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष भोजराज भट्टले काठमाडौंको अव्यवस्थित तारहरु मिलाउने र व्यवस्थापन गर्ने बारेमा प्राधिकरणसँग छलफल भएको र काम तिब्रगतिमा अगाडी बढेको जानकारी दिए ।
‘सूचनामा दशैं अगाडि सबै व्यवस्थित गर्ने भनिएको भएपनि अहिले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई ध्यानमा राखेर तोकिएका स्थानहरुमा काम गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘हामीले एयरपोर्टदेखि सोल्टी होटलको सडक र त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगंजसम्मको सडकमा विशेष ध्यान दिएका छौं ।’
उनकाअनुसार त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगंजसम्मको टेलिफोन तथा विजुलीको पोलमा भएका अव्यवस्थित तारहरुको व्यवस्थापन यसअघि नै गरिसकिएको छ भने अहिले पुन त्यसलाई ‘फाइन टच’ दिने कार्य हुँदैछ । त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगंजसम्म तार व्यवस्थापन गर्दा करिब १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको र सो खर्च कम्पनीहरुले नै बेहोरेको उनको भनाई थियो ।
‘त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगंजसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाले खर्च दिने भनेको भएपनि हालसम्म दिएको छैन्, आगामी दिनमा महानगरपालिकासँग मिलेर काम गर्ने योजनामा छौं,’ अध्यक्ष भट्टले भने ।
त्यसैगरी आइस्पानहरुले एयरपोर्टदेखि सोल्टी होटलसम्मको सडकका पोलहरुमा रहेका अव्यवस्थित तारहरुको व्यवस्थापन तिब्र गतिमा गरिरहेका छन भने अन्य आवश्यक स्थानहरुमा पनि दशैं अगाडि नै सक्ने योजना लिएका छन् ।
आइस्पानहरुले दशैंपछि अन्य सडक तथा स्थानहरुका तारहरु क्रमशः व्यवस्थापन गर्ने योजना लिएका छन भने यसमा प्राधिकरणले समेत आर्थिकरुपमा सहयोग गर्ने जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणको सो सूचनामा अव्यवस्थितरुपमा तार टाँग्ने वा तारलाई रोड क्रस गराईएको पाईएमा त्यस्ता व्यक्ति तथा संघ संस्थालाई जिम्मेबार बनाई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७६, मंगलवार
जोपो ब्राण्डका फोनहरु बजारमा, ब्ल्याक फ्राइडेमा किन्न सकिने
भाइबरबाट ५२ देशहरुमा कुनै पनि फोन नम्बरमा फ्रि कलको सुविधा